येशू ख्रीष्ट TARDE आउन भने कम मा मण्डली पीढी गायब! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
मलाई जस्तै, सबैलाई चर्च को हर्ष शारीरिक अन्तमा पनि 14 वा 15 मा पृथ्वी फर्के, वा छैन येशूको सेप्टेम्बर 13 मा र ठाउँ लिन गरेनन् भनेर देख्न सक्थे सेप्टेम्बर 2015 को महिना।
म यस फिर्ती समय मा उत्पन्न गर्न सक्छ कि मेरो लेख केही मा speculated थियो र म गलत थियो!
यो पहिलो पटक होइन। तपाईं पहिले नै थाहा तर म एक अगमवक्ता छैन हूँ!
तर, यो हामी बस येशू ख्रीष्टको फिर्ती अघि समय अन्तमा छैनन् भन्ने होइन।
बरु, सेप्टेम्बर को घटनाहरु वास्तवमा धेरै बलियो संकेत थिए।
हामी रूसी सेना को सक्रिय सहभागिता र चिनियाँ सेना को समय को लागि एक निष्क्रिय सहभागिता माध्यम सिरियाली युद्ध को worsening एक महत्वपूर्ण देखेको छु।
हामी पनि पोप फ्रान्सिस सेन्ट प्याट्रिक गरेको कैथेड्रल आफ्नो प्रवचन समयमा अमेरिकी आफ्नो यात्रा समयमा एक सनसनीपूर्ण कथन गरे कि पाइएन।
यो पोप गरेको को अनुवाद कथन:
« क्रूसमा हामीलाई सफलता मापन गर्न अर्को तरिका देखाउँछ। हाम्रो बीउ रोप्नु हो। परमेश्वरले हाम्रो काम फल देख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीं हाम्रो प्रयासमा र काम फल उत्पादन असफल र छैन जस्तो देखिन्छ भने र, हामी, येशू ख्रीष्टको चेला हुन्, र आफ्नो जीवन, त्यसभन्दा बोल्ने, विफलता मा समाप्त भएको छ भनेर पनि सम्झनै पर्छ क्रूसमा को विफलता। «
उहाँले येशू ख्रीष्टको जीवन र बलिदान क्रूसमा विफलता मा समाप्त गरेका घोषणा गर्न dared « क्रूसमा को विफलता। »
यो पोपको क्याथोलिक चर्च को सर्वोच्च नेता, आफ्नो कथन हल्कासित लिएका सकिँदैन।
यो येशू ख्रीष्टको देवत्व को कुल इन्कार छ र वेटिकन मा विश्वास को मृत्यु को एक सरकारी घोषणा बराबर छ र यसरी थप मेरो लेखमा पुष्टि: « येशू ख्रीष्ट, एक सहायक र वेटिकन संग्रहालय भाग भयो, »
उहाँको कथन यो विश्वास गर्न छाडे र येशू ख्रीष्ट अस्वीकार गरेको छ कि एक भर्ना छ।
« यो हाम्रो पवित्र क्याथोलिक चर्च आधिकारिक thunderous वाहवाही मा सेन्ट प्याट्रिक गरेको कैथेड्रल मा अमेरिकामा मृत्यु छ स्पष्ट छ। «
पोप फ्रान्सिस यो कथन येशू ख्रीष्टको नजिकै फिर्ती घोषणा जो अन्त समयमा « धर्मत्यागलाई » को एक धेरै बलियो बाइबलीय चिन्ह छ।
आफ्नो शब्द गरेर पोप हाम्रो पवित्र क्याथोलिक चर्च crucifying धर्मत्यागलाई वेटिकन formalized छ।
उहाँले संसारका सबै ख्रीष्टियानहरूलाई « येशू ख्रीष्टको विफलता » मा आफ्नो टिप्पणी परमेश्वर, येशू ख्रीष्ट, चर्च र विश्वास गर्न एक पत्रुसको उत्तराधिकारी र अपमानजनक को अयोग्य छन् बोल्न नसक्ने छोडे।
हामीलाई मसीहीहरूले लागि, पोप फ्रान्सिस आफ्नो टिप्पणी धरती मा ख्रीष्टको असल गोठालो र योग्य प्रतिनिधि निम्न र पनि वेटिकन अब पनि पवित्र हेर्नुहोस को चर्च को ठाँउ छ बनाएको छ क्याथोलिक।
क्याथोलिक चर्च को पवित्र हेर्नुहोस हरेक मसीही को हृदयमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती सम्म अब छ।
हामी सबै, मेरो प्रिय भाइबहिनीहरू, विश्वास को keepers र येशू ख्रीष्टको वचन भएका छन्।
तर पोप आधिकारिक पोप रहेको र हामी यो आदर गर्नु पर्छ।
यो पोप फ्रान्सिस जवाफदेही हुनेछ, आफ्नो फिर्ती मा, येशू ख्रीष्टमा छ; बस भनेर कुरा को लागि हामीलाई सबै रुचि। हामी सबै पापी छन् भनेर नबिर्स!
येशू ख्रीष्ट, हामीलाई, humiliated बेइज्जत, दुरुपयोग, scourged गर्न लागि प्रेमले स्वीकार परमेश्वरको मात्र छोरा र अन्तमा हाम्रो पापको हामीलाई छुटकारा गर्न क्रूसमा।
यो स्वर्गको द्वार हामीलाई खुला छन् कि येशू ख्रीष्टको बलिदानको, रगत र प्रेम हो।
येशू ख्रीष्टको टाँग्ने प्रेम उहाँको आउन गर्ने सबै को दूर पाप काम गर्न उहाँले आफूलाई परमेश्वरको छोरा बनाएको छ जो एक विफलता तर अपरिहार्य बलिदान, को परिणाम छैन र यसरी परमेश्वर पिताको अघि हामीलाई सफाइ।
परमेश्वरले चिहान मा तीन दिन पछि जीवन येशूको खडा भएजस्तै परमेश्वरको प्रेम, बलिदान र येशू ख्रीष्टको रगतले आफ्नो माफी दिनुहुनेछ र सबै ती आउनेछ जसले अन्तिम न्याय मा जीवन पङ्क्ति हुनेछ येशू ख्रीष्ट।
हामी सुरक्षित गरिएको हुनेछ र सधैंभरि येशू ख्रीष्ट गर्न एकताबद्ध हुनेछ किनभने त्यसैले हामी प्रमोदवनमा अनन्त जीवनको आनन्द सक्छन्।
येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा राज्य प्रविष्ट गर्न मात्र बाटो छ!
हामी हाम्रो मुक्तिको लागि फेरि र फेरि प्रार्थना गर्नुपर्छ र लेट यी कठिन समयमा हामीलाई आवश्यक छ कि परमेश्वरको दैनिक मद्दत प्राप्त गर्न।
हामी पनि पोप फ्रान्सिस, सबै मानिसजातिको, हाम्रो भाइबहिनीहरू मुक्तिका लागि र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको शीघ्र फिर्ती लागि प्रार्थना गर्न आवश्यक
हामी पहिले नै र दुर्भाग्य थियो हाम्रो चर्च संसारमा खेदो गर्न जारी कि महसुस गर्नुपर्छ, अब आधिकारिक मरेको छ।
त्यसैले हामी मेरो प्यारो भाइबहिनीहरू सबै शोक गर्ने तरिकामा छ र केवल हाम्रो प्रभु र राजा येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा।
यो पोप स्पष्ट वास्तवमा यसको विश्वासी चर्च छोडेर येशूको अस्वीकार गरेको छ भन्ने तथ्यलाई यस धर्मत्यागलाई साँच्चै अब पूर्ण र सामान्य छ भनेर कडा संकेत गर्छ।
कि त्यो त अब के हुनेछ?
पाठ्यक्रम म मात्र मचान अनुमानको मा प्रतिक्रिया को तत्व ल्याउन सक्छ।
यी अनुमानको र छैन भविष्यवाणीहरू छन् …!
पोप फ्रान्सिस सबै धर्म को एक संगठन को दुनिया नेता बन्न देखिन्छ। यो पक्कै पनि चाँडै एक सिर्जना गर्नेछ हे को rganization आर eligions termed हुन सक्छ र « या » त्यो संयुक्त राष्ट्र को छवि मा हुन सक्छ « संयुक्त राष्ट्र। »
सामेल वा त्यस्तो मानविय धार्मिक संगठन समर्थन गर्ने मसीहीहरूले येशू ख्रीष्टको शिक्षा निम्न टाढा हुनेछ भन्न अनावश्यक।
केही तिनीहरूले दुर्भाग्य विपत्ति मा rhythms जारी र येशू ख्रीष्टको फिर्ती सम्म फेरि र फेरि विस्तार हुनेछ, परिवर्तन भएको छ।
आरमागेडोन को युद्ध मा
म यो सिरियाको छ भनी विश्वस्त रहन, र यो अचानक चक्कु यहूदीहरूले मा यी सबै आक्रमण संग एक नागरिक युद्ध को शुरुवात बाँच्न सुरु कि इस्राएलका मा आक्रमण जारी हुनेछ।
विश्व अर्थव्यवस्था लागि:
रूस र चीन भुक्तानी र व्यापार को एक स्वतन्त्र सिस्टम सेट अप भए तापनि, यो अमेरिकी अझै डलर को परिणम पतन स्वीकार हुनेछ भनेर विश्वास गर्नु मूर्खता हुनेछ।
अमेरिकी अग्रिम नगद बिना हामीलाई संसार तिर बरु विशाल चरण बनाउन र त्यसैले केवल क्रेडिट आधारित छ।
अमेरिकी आयातित गर्न चाहनुहुन्छ र वैश्विक क्रेडिट को EDF द्वारा व्यवस्थित गर्न धेरै संभावना।
त्यसैले विश्व दासत्व जस्तै हुनेछ र हाँ सामान्य क्रेडिट ग्रह पकड हुनेछ, अमेरिकी आधिकारिक संसारको मालिकको हुनेछ।
विश्व राजनीति को संगठन लागि:
हामी धेरै visibly संसारको एक geopolitical विभाजन गर्न द्वारा सुपर ठूलो शक्तिहरु सिर्जना हुनेछ:
« उत्तर अमेरिका – रूस – चीन – भारत – अफ्रिका – युरोप – अष्ट्रेलिया – दक्षिण अमेरिका – जापान – कोरिया »
यो सबै पूर्वी युरोप एकीकृत गर्न स्थानमा छ भनेर देखिन्छ किनभने तपाईं पूर्व यस सूची मा छैन देख्न सक्छौं रूपमा; जहाँ coincidentally बसोबास र बसोबास वा मिश्र वा उच्च घनत्व संग अन्य मुसलमान देशहरुमा साउदी अरब शरण लिन जा को शरण सट्टा लिन आउँदै प्रवासिहरु को तरंगहरु।
यो तिनीहरूले बसोबास र 1948 देखि युरोप शरण लिन आउन मौका द्वारा थियो विचार छैन!
त्यो स्पष्ट म हामी ठूलो बनाउने छन् जस्तो लाग्छ के तिर strides।
यी अनुमानको मा ठूलो हरुवा पाठ्यक्रम मसीहीधर्म युरोप मा outvoted गर्न हुनेछ।
मसीही विश्वासको « यो कोक्रो
इस्लामी बन्न! «
क्याथोलिक चर्च गायब गर्न doomed लाग््छ र म यो एक पुस्ता भन्दा कम मा के गर्न सक्छ लाग्छ!
हामी शैतान राजनीतिज्ञलाई छ र येशू ख्रीष्ट आगामी छैन भने, उहाँले आफ्नो फिर्ती मा विश्वास पाउन गर्छ भनेर हेर्न। (लूका 18: 7,8)।
यो मेरो प्रिय भाइहरू र येशू ख्रीष्टमा बहिनीहरु छ, हाम्रो चर्च र हाम्रो भविष्य मसीही भावी geopolitical अनुमानहरू ठूलो रणनीतिकारों र ग्रह को राजनीतिज्ञ द्वारा सम्झौता गरेको जस्तो देखिन्छ।
र हामी कुन के गर्नुपर्छ सक्छ!
हामी अध्यागमन निर्वाचन कार्यक्रम बिरुद्ध लडाई बनाउन राजनीतिक दल चुन्नु गर्न मदत यी उच्च वैश्विक नीति निर्माता द्वारा लिया निर्णयहरू विरोध गर्न कानूनी माध्यमबाट गर्न सक्छन्।
तर हामी नतिजाको लागि जिम्मेवारी सहन हुनेछ …! (हिंसाको र नागरिक वार्स!)
हामी पनि देखाउन र मांग तर यो हामी दुष्ट लागि जान्छन् निश्चित छ सक्छन्।
त्यसैले हामीलाई येशू ख्रीष्ट मदत गर्न, उहाँलाई विश्वास गर्न छिमेकीलाई प्रेम र यो हामीलाई हिट भने अन्य गालामा बारी हामीलाई सोधे छ सम्झना गरौं।
त्यसैले हाम्रो मात्र आशा हाम्रो प्रभु र राजा येशू ख्रीष्ट, आउन र समय को अन्त गर्न हामीलाई बचाउन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ जो परमेश्वरको मात्र छोरा मा विश्वासमा निहित।
येशू ख्रीष्ट आउँछन् र समय को अन्त गर्न हामीलाई बचाउन र त्यसपछि हामी उहाँले तुरुन्त आफ्नो प्रतिज्ञा पालन गर्नेछु भनेर आश्वासन छन् प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो एक निश्चय छ।
आफ्नो वचन सत्य छ किनभने, उहाँको वचन विश्वास राख्नुहोस्।
येशू ख्रीष्ट मेरो राजा हुनुहुन्छ
हामी सबै हामी अन्त समयमा पहिले नै भएका छन् भनेर बुझ्न किनभने आफ्नो शीघ्र फिर्ती लागि व्यग्र प्रार्थना गर्नुपर्छ।
म अपहरण सेप्टेम्बर 2015 को महिना मा आयोजित थिएन किनभने हाम्रो भाइबहिनीको धेरै निराश छन् भनेर थाह छ।
तर प्रभुको फिर्ती नजिकै छ र यो, यो वर्ष फेरि शायद 2015 हुन सक्छ।
धेरै चिन्हहरू यो विचार गर्न अनुमति, तर परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको फिर्ती को दिन र समय निर्णय गर्न छ।
के हामी प्रत्येक लागि महत्त्वपूर्ण छ प्रार्थना र संसारको आक्रमण र हाम्रो भाइबहिनीको धेरै विश्वास ज्योति अस्पष्ट कि गहिरो अन्धकार पार गर्न मदतको लागि परमेश्वरलाई सोध्नु हो।
गरौं हाम्रो विश्वास को ज्वाला राम्रो lit र यो समय को mists मा बन्द जान्छ lest यस संसारको depravity देखि सुरक्षित।
येशू ख्रीष्ट हाम्रो ढोकामा छ। तर केवल परमेश्वरले निर्णय गर्दा वा त्यहाँ प्रहार हुनेछ। त्यसैले हेर्न र येशू ख्रीष्टको प्रेम र परमेश्वरको कानूनको अनुपालन मा पालना।
सबै संकेत र भविष्यवाणीहरू दैनिक कडा येशू ख्रीष्टको नजिकै फिर्ती घोषणा लागि हामीलाई, खुशी होस्।
आफ्नो आतुर फिर्ती को निश्चय मा विश्वास राख्नुहोस्।
येशू ख्रीष्टको फिर्ती को अघिबाटै जान्ने काम प्रार्थना र परमेश्वरले हामीलाई पठाउनुहुन्छ जसलाई मदत।
हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् र उहाँको पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्टको फिर्ती सम्म हरेक दिन हामीलाई मदत गर्नेछ भन्ने गरौं।
हामी यो आवश्यकता जब हामी निष्कपटता र विश्वास संग प्रार्थनामा यहाँ सोध्न पर्छ परमेश्वरको मदत प्राप्त गर्न भनेर सम्झना।
परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र इच्छाको दिनुभयो र हामी उहाँलाई सोध्न छैन भने त्यसैले हाम्रो जीवनमा हस्तक्षेप छैन।
म तपाईं ट्रयाक मा रहन आदेश मा आफ्नो दैनिक जीवन डोऱ्याउन परमेश्वरको सोध्न आमन्त्रण।
यो falter गर्न समय छैन, येशू ख्रीष्ट चाँडै हाम्रो साथ छ र हाम्रो जीवन फर्केपछि कायापलट हुनेछ।
येशू ख्रीष्टको फिर्ती पछि हुनेछ के थाहा गर्न, म मेरो लेखमा पढ्न तपाईं आमन्त्रण:
प्रिय भाइहरू र ख्रीष्टमा बहिनीहरु आफ्नो सम्पर्कमा ब्लग ठेगाना कुराकानी गर्नुहोस्।
हामीलाई सबै ख्रीष्टको सिपाही र « येशू ख्रीष्ट चाँडै फिर्ता आउँदै छ » असल वचन फैलाउने काम होस्
हेर्नुहोस् र प्रार्थना।
प्रेम र येशू ख्रीष्टको शान्ति तपाईं सबै मा होस्।